Khasaaraha qaraxa Liido iyo wararkii ugu dambeeyey - BANAADIRSOM
Home WARARKA CAALAMKA Khasaaraha qaraxa Liido iyo wararkii ugu dambeeyey
Khasaaraha qaraxa Liido iyo wararkii ugu dambeeyey
Muqdisho (Banaadirsom) – Faahfaahino hor dhac ah ayaa soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxa iyo weerarka tooska ah ee caawa ka dhacay xeebta Liido, gaar ahaan Hotel cusub oo lagu magacaabo Pescatore, kaas oo ku yaalla inta u dhaceysa Hotellada Beach View iyo Oceian View ee xeebta Liido.
Adeega gurmadka deg dega ah ee Amin Ambalaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyey dhimashada 6 qof iyo dhaawacyada 7 kale, waxaana weli gudaha Hotelka ka dagaalamaya rag hubeysan.
Dad badan oo ay ku jiraan Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Xijaar, xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa laga soo badbaadiyey Hotelka.
Dadka ku dhaawacmay weerarkaan waxaa ka mid ah Taliyaha ciidanka birmadka ee booliska Soomaaliya Jeneraal Siyaad, balse si rasmi ah looma xaqiiji karo khasaaraha, maadaama uu weli weerarku ka socdo gudaha Hotelka.
Muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dad xoog leh oo qaraxa ka dhashay iyo rasaas si darandoori ah u dhaceysa, waxaana kala cararay dad aad u badan oo ku caweynayey barxadda weyn ee Xeebta Liido.
Previous articleFaah-faahin: Weerar qarax ku bilowday oo lagu qaaday Hotel ku yaalla Liido iyo rasaas ka socota
Next articleRooble oo shaaciyey xilliga uu furmayo shirka Golaha Wada-tashiga Qaranka